Madaxweynihii dafiray fayraska corona oo ay shacabkiisu sameeyeen tallaabo layaab leh - BBC News Somali
Madaxweynihii dafiray fayraska corona oo ay shacabkiisu sameeyeen tallaabo layaab leh
haweeney ka mid ah dadka gacanta ka gaystay howshan
Kooxo u dhaq dhaqaaqa arrimaha bulshada oo ka careysan habka Brazil ay wajahday la tacaalidda cudurka Covid-19 ayaa xabaalo macmal ah oo gaaraya 100 ka sameeyay xeebta Rio Copacabana, si ay dadka dalkaas ugu xasuustaan ku dhawaad 40,000 oo qof oo cudurka u geeriyootay.
Dadka howshan hormuudka u ah ayaa sheegay in taageerayaasha madaxweyne Jair Bolsonaro, ay ku jees jeeseen arrintan ayna waxyeello u gaysteen qabuuraha macmalka ah.
In dalka xayiraad la galiyo si loo xakameeyo fayraska ayaa waxaa diiday madaxweynaha, waxaana uu sidoo kale dafiray halista cudurku leeyahay, iyadoo taasina ay si aad ah u kala qaybisay dadka ku nool dalkaas.
Waddanka Brazil ayaa laga helay tirada labaad ee ugu badan adduunka ee kiisaska fayraska korona, waana dalka saddexaad ee ugu dhimashada badan caalamka, marka la eegayo dadka uu galaaftay xanuunkaas.
Carro la tuuray loona ekeysiiyay qabuuro ayaa laga sameeyay xeebta, iyadoo dadka taageera madaxweynaha lagu dhaliilayo in ay sameynayaan ficillo la mid ah kuwa uu sameynayo hoggaanka dalka ugu sarreeya oo ah madaxweynaha.
Madaxwaynihii hore ee Barazil Lula da Silva oo xabsiga laga siidaayay
Xaflad dhalasho oo Coronavirus uu murugo u beddelay
Antonio Carlos oo ka mid ah dadka sameeyay xabaalahan loogu tala galay in lagu xasuusto dadkii fayraska karona u geeriyooday ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in madaxweynuhu aanu wali garwaaqsanin in arrintan ay tahay mid ka mid ah dhacdooyinkii ugu xumaa ee dalka soo maray taariikhda inta la ogyahay.
"Qoysasku waxa ay ka murugeysan yihiin kumannaan qof oo dhintay, waxaana jira shaqo la'aan iyo gaajo," ayuu yiri Mr Antonio.
Balse waxa uu sheegay in qaar ka mid ah taageerayaasha madaxweynaha ay tallaabadan u arkaan wax lagu qoslo.
Waxa uu sheegay in kala fogaanshaha dadweynaha ay uga sii dareyso dhaaqaale xumada ka jirta dalkaas, isagoo sidoo kale fayraska ku tilmaamay hargab yar oo aan sidaas usii weynayn.
Bishii April Mr Bolsonaro ayaa diiday in Covid-19 uu yahay xanuun halis ah, wuxuuna sheegay inuu yahay "hargab iska sahlan".
Kaliya Mareykanka ayaa la xaqiijiyey in uu Brazil ka badanyahay tirada kiisaska Covid-19, sida ay muujisay warbixin ay soo saartay Jaamacadda Johns Hopkins.
Dalka Brazil hadda dhimashadu waxa ay maraysaa 40,919 oo qof, sida ay wasaaradda caafimaadka ee waddankaas ku shaacisay warbixintii ugu dambeysay ee ay soo saartay, waxaana la filayaa in dhowaan tiradu intaas ka badato oo waliba ay dhaafto tirad cudurka karona ugu geeriyootay dalka UK.